Cloudy Sense: Lump sum in Oct 2010
Lump sum in Oct 2010
- ရွေးကောက်ပွဲ ဖျက်သိမ်းရန် ကြေညာချက် ပေါ်ထွက်လာ Oct 19, 2010
ကလုံးဝ မဲ မပေး ဘူး Oct 12, 2010
က မဲ မပေးကြောင်း ကို
ဦးညဏ်ဝင်းနဲ့သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီသတင်းကိုအေအက်ဖ်ပီ က ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
မဲ မပေးခြင်းဟာ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ကို
ကန့် ကွက် တယ်ဆိုတယ်လို့ သွယ်ဝိုက်
ပြည်သူလူထုကိုလည်း မဲ မပေးကြဖို့ဒေါ်စုက
Aung San Suu Kyi says "not vote"
YANGON, Myanmar – Detained pro-democracy
lader Aung San Suu Kyi says she will
not vote in Myanmar's election,
even though authorities have informed
her she is on the electoral roll.
Suu Kyi's lawyer Nyan Win said
Tuesday that Suu Kyi informed him
that she did not intend to vote
in the Nov.7election. Nyan Win told
reporters her position after meeting
her at her home, where she is under
house arrest. She had previously
advised followers that they have
The military government disbanded
party because it wouldn't register
for an election it considers unfair
and undemocratic. Suu Kyi was not
listed on voter rolls initially but
a supplemental list included her name.
- စစ်ကျွန်ဘဝ သွတ်သွင်းမယ့်ပွဲ Oct 09, 2010
ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပဖို့ တလလောက်ပဲ
လိုပါတော့တယ်။ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ပါတီတွေရဲ့
စည်းရုံးရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ သိသာ မြင်သာ
ရှိတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဂျာနယ် စာမျက်နှာတွေ
ပေါ်မှာ နည်းနည်း ပါးပါး ရေးသားနေတာတွေ၊
လက်ကမ်း ကြော်ငြာ တွေ ဖြန့်ဝေတာလောက်ပဲ
လုပ်နိုင်တာပါ။ ဒါလည်း ပါတီတိုင်းက လုပ်နိုင်တာတော့
သတိထားမိသလောက် ပြောရရင်တော့ ပြည်သူတွေဟာ
ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိသလို မျှော်လင့်
ယုံကြည် အားထားတာ လည်း မတွေ့ရပါဘူး။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်းနဲ့လုပ်ပြီး
အတည်ပြု သွားတယ်ဆိုတာကို သူတို့ မမေ့ကြသေး
စစ်အစိုးရဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အတည်ဖြစ်ရေး
အတွက် မဟုတ်မမှန်တဲ့နည်း၊ မတော် မတရားတဲ့နည်းတွေ
သုံးပြီး ပြည်သူကို လက်တလုံးခြား လုပ်သွားတယ်
ဆိုတာ ပြည်သူက သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှ
စစ်အစိုးရလုပ်သမျှ ခံလိုက်ရတာပဲ။ အခုလည်း ဒီလိုပါပဲ။
သူတို့လုပ်ချင်တာ လုပ်အုံးမှာပဲ။ ငါတို့လည်း ဘာမှ
မတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ဥပက္ခော
ပြုလိုက်တဲ့ သဘောပါ။ ကိုယ့်ဆန္ဒကို အမှန်အတိုင်း
ထုတ်ဖော်ခွင့် မရလို့ စိတ်မ၀င်စားတဲ့ သဘောလို့
ပြည်သူဆိုတာ ခေတ်ရဲ့ သားကောင်၊ ခေတ်ရဲ့
အြပဌာန်းခံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ကို ဖန်တီးဖို့
အခြေအနေ မပေး သေးပါဘူး။ ခေတ်ကို ဘယ်လို
ဖန်တီးမယ်၊ ဘယ်လို တည်ဆောက်မယ်။
ဒီမို ကရေစီကို ဘယ်လို ကျင့်သုံးမယ် စတာတွေ
ပြောပြီး လှုပ်ရှားနေတာက ပါတီတွေပါ။
အဲဒီပါတီတွေကို တခုလောက် မေးချင်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အောက်မှာ ဘာများလုပ်လို့
- စစ်အစိုးရ၀ါဒဖြန့် အနုပညာရှင်များ
အားလုံးကို အမေရိကန် အစိုးရက
အမေရိကန်အစိုးရ၏ လူဝင်မှု ကြီးကြည်ရေးဌာနက
အိုဗေးရှင်းအဖွဲ့ တခုလုံး၏ ဗီဇာကို ရုတ်သိမ်းကြောင်း
ဥပဒေနဲ့အညီ ထိုဧည့်ဗီဇာတွေကို ရုတ်သိမ်း
လိုက်တယ်လို့ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
စိုးမိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ရဲလေး၊ မောင်ေ��ာင်လွင်၊
ပက်ထရစ်မေလာ၊ ရဲဖုန်း၊ တွတ်ကီ၊ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း၊
- အားလုံးပေါင်း ၁၀ ဦးစလုံးကို ဗီဇာရုတ်သိမ်း
နံမည်ရင်းတွေနဲ့ ရေးထားတာကို ဖတ်ပြရရင်
- Wyaw Min, Ye Tuk Min, D Myaing,
May H Mu, Wyine Thein စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်သွားပြီးသား လူတွေကိုကောပါ ဗီဇာရုတ်သိမ်းပြီး
အရေးယူတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ အမေရိကန်
အစိုးရအနေနဲ့ အခုလိုမျိုး မြန်မာ အမေရိကန်
ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင် အများစုက လက်မခံတဲ့ကိစ္စကို
အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်း လက်မခံဘူး ဆိုတာကို
“အခုလိုမျိုး အမေရိကန်ရောက် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့
ညီညွတ်တဲ့ သဘောထားကို တယောက်တလက်၊
ကိုယ်တိုင်ကလည်း တရားသဖြင့် ရပ်တည်ပေးကြတဲ့
အတွက်ကော၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့
ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် အစိုးရကိုယ်တိုင်က
ဥပဒေနဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အတွက်
- အတွင်းအနှစ်သာရ ပြောင်းလဲမသွား 05/10/10
“---မဲပေးလိုက်ရင် နှစ်ပေါင်း ၂ဝ လုံးလုံး မရရှိခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေ လိုချင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ တရားဝင်မှုကို ကိုယ်တိုင် ပေးလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်မှာပါ---”
နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ကြာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ တစ်ဘက်သက် အာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ်တာ ခံခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ တာစူနေကြပါပြီ။
ရွေးကောက်ပွဲရက် နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှ ရှုတောင့်ပေါင်းစုံက အမြင် အမျိုးမျိုးဟာလည်း အကျယ်လောင်ဆုံး ပေါ်ထွက် လာနေကြပါတယ်။ တချို့က ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ရေး၊ မဲမပေးရေး၊ တချို့က ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေကို မဲသွားပေးရေး။ မဟုတ်ရင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အခွင့်အရေးပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားမယ်၊ တချို့ကတော့ အစကတည်းက ကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မတတ်သာလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြသာနာမဖြစ်ရင်ပြီးရော စစ်အစိုးရ လိုချင်နေတဲ့အတိုင်း ကြံ့ခိုင်ရေးကိုပဲ မဲပေးလိုက်မယ် ဒီအရေအတွက်ဟာလည်း ထည့်စဉ်းစားရလောက်အောင် ကြီးမားနေနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပဲ မဲပေးမယ့်သူတွေ၊ အဲဒါကို အမြင်အမျိုးမျိုး၊ အုပ်စုအမျိုးမျိုး၊ အသံအမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာနေကြပါတယ်။
တကယ်တော့ ၂ဝ၁ဝ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတ် စစ်အာဏာရှင်တွေက မန်းမှုတ်လိုက်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေ တခဲနက် ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ခြေဖျက်ပြီး စစ်တပ် အုပ်စိုးမှုကို တရားဝင်ကြောင်း ပြဖို့ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ လုံးလုံး စစ်အာဏာရှင်တွေ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးပမ်းမှုရဲ့ အဆင့်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။